Iindaba -I-BXL yoyilo iphumelele iimbasa ezintathu zePentawards zoBuchule baMazwe ngaMazwe
Kumnyhadala "wePentawards Festival" ukusukela ngomhla wama-22 ukuya kowama-24 kweyoMsintsi yowama-2020, kwanikelwa iintetho eziphambili. Umzobi wegraphic owaziwayo uStefan Sagmeister kunye nomlawuli we-brand kunye nokupakisha uyilo lwe-Amazon USA UDaniele Monti babephakathi kwabo.
Babelane ngolwazi lwamva nje kuyilo kwaye baxoxa ngemixholo eyahlukeneyo echaphazela icandelo lokupakisha namhlanje, kubandakanya Kutheni Izinto zobuhle; Ukuqonda intsingiselo yenkcubeko ukomeleza iiBrand & Packaging; Isizalo soYilo "oluQhelekileyo", njl.
Lo ngumthendeleko obonakalayo wabayili, apho ubugcisa bungumda ongenamda. Njengebhaso lika-Oscar kushishino loyilo lwempahla kwihlabathi liphela, imisebenzi ephumeleleyo ngokungathandabuzekiyo iya kuba zizinto zokupakisha iimveliso zehlabathi.
Umnumzana Zhao Guoxiang, uCEO we-BXL Creative, wamenywa ukuba azokuwonga ibhaso labaphumelele iplatinam!
Ukhuphiswano loyilo lwePentawards
Iyonke imisebenzi emithathu ye-BXL Creative iphumelele amabhaso amakhulu.
I-Lady M Mooncake Ibhokisi yeZipho
Igama lebrand: I-Lady M Mooncake Ibhokisi yeZipho
Uyilo: I-BXL yoyilo, uLady M
Umxhasi: Ukuguquka kweLady M
Isilinda sokupakisha simele imilo yokuhlangana kwakhona kwesetyhula, ubunye kunye nokuhlanganisana. Iziqwenga ezisibhozo zikaMonconcakes (ezisibhozo zilinani elinethamsanqa kwiinkcubeko zaseMpuma) kunye neearches ezilishumi elinesihlanu zimele umhla woMnyhadala weMid-Autumn, nge-15 ka-Agasti. Iithoni zasebukhosini-eziluhlaza zokupakisha ziphefumlelwe yimibala yesibhakabhaka sasebusuku ekwindla ukwenzela ukuba abathengi bafumane ubungangamsha bamazulu kumakhaya abo. Ngelixa ujikeleza i-zoetrope, iinkwenkwezi ezifakwe igolide ziqala ukubengezela njengoko zibamba ukukhanya. Ukuhamba okunamandla kwezigaba zenyanga kubonisa umzuzu wemanyano ehambelanayo kwiintsapho zamaTshayina. Kwintsomi yamaTshayina, kuthiwa inyanga sesona sangqa siqaqambe kakhulu ngalo mhla, usuku lokudibana kosapho.
Ngokubanzi, ukupakishwa kwerayisi kuyalahlwa emva kokusetyenziswa, okuya kubangela inkunkuma. Ukukhumbula imeko yokupakisha enobuntu, umyili we-BXL Creative wenza ukuba ukuphakheja kwerayisi kusetyenziswe kwakhona.
Idibanisa ngobuchule umsebenzi, umhombiso kunye noyilo loyilo lwemveliso. I-retro kwaye inomhombiso obalulekileyo. Ingasetyenziselwa njengemihombiso kwaye inokuphinda isetyenziswe kwakhona ukufezekisa ukhuselo lwendalo.
Uzalelwe kwi-capital "yoyilo" yase-China -Shenzhen, i-BXL Creative ihlala ithobela umgaqo wokuba ubuGcisa kunye ne-Innovation ingumthombo wophuhliso lwenkampani.
Egqithileyo I-BXL yokuPakisha okuYilayo kweGuizhou Factory ityikitywe ngokusemthethweni!
Okulandelayo: I-BXL yoyilo iphumelele amabhaso amathathu e-iF yoyilo